KMD Institute နှင့် Next Lvl Esports & STEAM Academy တွင်တက်ရောက်နိုင်မည့် NCC (UK) ပထမနှစ် ဒီပလိုမာ Diploma in Business (with Esports) အတွက် ၁၀၀% ပညာတော်သင်ဆု လျှောက်လွှာ
အောက်ဖော်ပြပါ Form ကို English (အင်္ဂလိပ်) လိုသာဖြည့်ပေးပါရန်။
သင့် နာမည်အပြည့်အစုံ။ *
သင် နေထိုင်သော မြို့။ *
သင့် လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်။ *
သင့် email လိပ်စာ (မရှိသေးလျှင်ဖြည့်စရာမလိုသေးပါ)။
သင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သော ခုနှစ်။ *
သင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းတွင်ဖြေဆိုခဲ့သည့် ဘာသာရပ်များနှင့် ရရှိခဲ့သောအမှတ်များကို ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်။ *
(ဥပမာ) --- English - 78 | Myanmar - 83 | Mathematics - 91 | ..... (အစရှိသဖြင့်...)
Esports, Gaming နှင့် သက်ဆိုင်သော အတွေ့အကြုံရှိပါသလား။ (ဥပမာ) Gamer, Pro Player, Streamer, Event Organizer စသည့် သင့်အတွေ့အကြုံရှိကဖြည့်ပေးပါရန်။ (မရှိက No လို့ရေးပေးပါရန်) *
(English လိုဖြေပါရန်) သင့်အနေဖြင့် တက်ရောက်ရန်လျှောက်ထားသော (NCC) Diploma in Business with Esports သင်တန်းကို အဘယ်ကြောင့် တက်ရောက်ချင်ပါသနည်း? ဤသင်တန်းကို တက်ရောက်ချင်းဖြင့် သင့်အလုပ်အကိုင်ရည်မှန်းချက်များ နှင့် သင့်နိုင်ငံ၏တိုးတက်မှုအတွက် မည်သို့အထောက်အကူပြုမည်ဟုထင်ပါသနည်း? (စာလုံးရေ ၂၅၀ အများဆုံး) *
(English လိုဖြေပါရန်) ပညာရေးပြင်ပတွင် သင့်အနေဖြင့် လူအများနှင့်အတူပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော သင့်ဦးဆောင်နိုင်စွမ်း ကိုအကောင်းဆုံး ဖော်ပြနိုင်မည့် အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို ဖော်ပြပေးပါ။ ဥပမာ - အားကစား၊ ပြိုင်ပွဲ၊ လုပ်အားပေးအလုပ်များ။ (စာလုံးရေ ၂၅၀ အများဆုံး) *
(English လိုဖြေပါရန်) သင့်ကို အဘယ်ကြောင့် ဤပညာတော်သင်ဆုအတွက် ရွေးချယ်သင့်ပါသနည်း? (စာလုံးရေ ၁၀၀ အများဆုံး) *
သင့်အနေဖြင့် ပညာတော်သင်ဆု ရရှိခဲ့မည်ဆိုပါက ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်သော ပထမနှစ် အတန်းသစ်များတွင် မဖြစ်မနေ တက်ရောက်နိုင်ပါသလား။ *
သင့်အနေဖြင့် ပညာတော်သင်ဆု ရရှိခဲ့မည်ဆိုပါက KMD Institute and Next Level Esports & STEAM Academy တို့မှ ကျင်းပပြုလုပ်သော Event များ Activity များ နှင့် Esports Marketing Event များတွင် Ambassador တစ်ဦးကဲ့သို့ ပူးပေါင်းပါ၀င်နိုင်ရမည်။ *